Ihe Otiti nke Iri | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ihe Otiti nke Iri
Mozis gwara Fero na ya agaghị anwa anwa bịa na nke ya ọzọ. Ma tupu ya alawa, ọ gwara Fero, sị: ‘N’etiti abalị, nwa nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ala Ijipt ga-anwụ, malite n’ọkpara Fero ruo n’ọkpara ndị na-eje ozi.’
Jehova gwara ndị Izrel ka ha rie nri pụrụ iche. Ọ gwara ha, sị: ‘Gbuonụ otu nwa ewu ma ọ bụ atụrụ dị otu afọ, teekwanụ ọbara ya n’ọnụ ụzọ ụlọ unu. Hụọnụ ya n’ọkụ, ma rie ya na achịcha na-ekoghị eko. Keenụ ihe n’úkwù unu, yirikwanụ akpụkpọ ụkwụ, dịrịkwanụ njikere ịla. N’abalị a ka m ga-eme ka unu hapụ Ijipt.’ Ì chere na obi atọghị ndị Izrel ụtọ mgbe Jehova gwara ha ihe a?
N’etiti abalị, mmụọ ozi Jehova gara n’ụlọ ndị Ijipt niile. Mmụọ ozi ahụ gburu nwa nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ụlọ ọ bụla a na-eteghị ọbara n’ọnụ ụzọ ya. Ma, e nweghị ihe mere nwa nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ nọ n’ụlọ e tere ọbara n’ọnụ ụzọ ya. E nweghị ezinụlọ ndị Ijipt mmadụ na-anwụghị na ya, ma ezinụlọ ndị ọgaranya ma nke ndị ogbenye. Ma, e nweghị nwa ọ bụla nwụrụ n’ezinụlọ ndị Izrel.
Ọkpara Fero nwụdịrị n’abalị ahụ. Ihe a gbawara Fero obi. Ọ bụ ya mere o ji gwazie Mozis na Erọn ozugbo, sị: ‘Bilienụ, sinụ ebe a pụọ. Gaanụ fee Chineke unu. Chịrịnụ anụ ụlọ unu lawa.’
Ndị Izrel si n’Ijipt pụọ n’oge ọnwa na-agbaru ala. Ha haziri onwe ha n’ezinụlọ n’ezinụlọ, nakwa n’ebo n’ebo. Ha dị nari puku mmadụ isii ma ụmụ nwoke ma ọtụtụ ụmụ nwaanyị ma ụmụaka. Ọtụtụ ndị na-abụghị ndị Izrel sokwa ha ka ha fewe Jehova. Ndị Izrel emechaala hapụ Ijipt.
N’afọ ọ bụla, ndị Izrel ga na-eri nri ahụ pụrụ iche ha riri n’Ijipt iji na-echeta otú Jehova si napụta ha n’Ijipt. Ihe a na-akpọ ya bụ Ememme Ngabiga.
“N’ihi nke a ka m ji hapụ gị ndụ, ka m wee jiri gị gosi ike m, ka e wee kpọsaakwa aha m n’ụwa dum.”​—Ndị Rom 9:17
Ajụjụ: Gịnị bụ ihe otiti nke iri Jehova tiri ndị Ijipt? Olee ihe ndị Izrel mere ka nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ezinụlọ ha ghara ịnwụ n’ihe otiti ahụ?
Ọpụpụ 11:1–12:42; 13:3-10